Ny fihetsiky ny Air Seychelles taorian'ny nahatongavan'i COVID-19 tany amin'ny Faritra Vanilla Island
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fihetsiky ny Air Seychelles taorian'ny nahatongavan'i COVID-19 tany amin'ny Faritra Vanilla Island
Seychelles dia mijanona ho afaka amin'ny Coronavirus, fa ny COVID-19 kosa dia tonga tao amin'ny Nosy Réunion, Nosy frantsay ary ampahany amin'ilay faritra Nosy Vanilla ihany. Ny tranga voalohany momba ny Coronavirus dia hita tamin'ny Alarobia Réunion rehefa niverina avy tany Etazonia avy any Etazonia ny olona iray 80 taona. Andro iray taty aoriana dia tranga 3 indray no voalaza.
Miankina amin'ny fizahan-tany ny faritry ny Nosy Vanilla ary ny fahatongavan'ilay viriosy ho any amin'ity paradisa fialan-tsasatra lavitra ity dia antso fanairana ho an'ny governemanta sy ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany ao amin'ny Faritra. Ny Repoblikan'i Seychelles dia mijanona ho paradisa fialan-tsasatra tsy misy otrik'aretina ary ny Birao fizahantany Seychelles dia te hitazona izany tahaka izany.
Ny kaompaniam-pirenena Air Seychelles dia naka fomba fampiasa mavitrika sy azo tanterahina amin'ny fanafoanana andiana sidina manerana ny tambajotram-paritra sy anatiny aorianan'ny fihenan'ny isan'ny mpandeha noho ny fihanaky ny coronavirus teo amin'ny tsena loharano manerantany.
Manomboka amin'ny 26 martsa ka hatramin'ny 30 aprily, hanafoanana sidina 10 amin'ny zotram-pirenena Mauritius ny kaompaniam-pirenena ary 11 amin'ny zotra Johannesburg.
Amin'ny zotra Mumbai, sidina 21 total no foanana hatramin'ny 30 Jona.
Taorian'ny fameperana fitsangatsanganana natao tany Israel farany teo dia hanafoana ny sidina roa mankany Tel Aviv ihany koa ny Air Seychelles.
Ny lisitr'ireo sidina feno fanafoanana \_ notarihina dia hita ao amin'ny tranokalan'ny Air Seychelles ao amin'ny airseychelles.com.
Charles Johnson, ny tompon'andraikitra ambony amin'ny varotra Air Seychelles, dia nilaza hoe: "Noho ny vokatra ratsy ateraky ny fangatahana COVID-19 dia noterena izahay hanafoana ny 40 isan-jaton'ny fandaharam-potoananay manidina hatramin'ny faran'ny volana aprily."
Nilaza i Johnson fa manara-maso ny toe-javatra isan'andro ny Air Seychelles ary "manantena fa tsy hisy fihenana fanampiny."
Ireo vahiny mitazona tapakila Air Seychelles voakasik'ireo fanafoanana ireo dia hampandrenesin'ny kaompaniam-pitondrana ny safidiny.
Satria nihena be ny fahombiazan'ny famandrihana ho an'ny sidina anatiny, taorian'ny fanafoanana be dia be avy any ampitan-dranomasina, dia hanamafy sidina maromaro ny zotram-piaramanidina amin'ny zotra Praslin.
Air Seychelles koa dia nanolotra politikam-panafahana vaovao hanomezana fahafaha-mivezivezy kokoa ny mpandeha rehefa mamandrika ny diany manerana ny tambajotram-piaramanidina. Ireo mpitsangatsangana miaraka amin'ny tapakilan'ny dia 4 na 31 Martsa dia avela hisafidy ny hanova ny datin'ny dia tsy misy sazy. Amin'ny fotoana fananganana indray, raha misy fahasamihafana eo amin'ny saran-dalana na nitombo ny haba, dia ampiharina ny sarany fanampiny.
Ireo mpitsangatsangana mangataka fanovana daty omena maimaimpoana dia asaina mitsidika ny maso ivoho misy azy ireo, ny Birao fivarotana Air Seychelles ao Mahe sy Praslin na miantso ny Call Center an'ny kaompaniam-piantsoana (248) 4391000.
Air Seychelles koa dia manentana ny mpiasa hiasa amin'ny fialan-tsasatra isan-taona amin'izao fotoana izao noho ny fihenan'ny hetsika manerana ny orinasa iray manontolo.
Manampy fihatsarana lafo vidy amin'ny tranonao
Fanakatonana Disney manerana an'izao tontolo izao noho ny coronavirus COVID-19